IINGCAMANGO EZINGAMA-50 ZEGRAVEL PATIO (I-DIY DESIGN PICTURES) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Iingcamango ezingama-50 zeGravel Patio (i-DIY Design Pictures)
Iingcamango ezingama-50 zeGravel Patio (i-DIY Design Pictures)
Wamkelekile kwigalari yethu enezona zimvo zilungileyo zegrabile. Ipatio yegrabile lulongezo olugqwesileyo nakweliphi na ikhaya kungekuphela ngenxa yobuhle obongezelelweyo elinikayo, kodwa nangenxa yeenjongo ezininzi ezinokubonelela. Ingayiguqula ngokulula iyadi yakho yangasemva ibe kukwandiswa kwegumbi lakho lokuhlala, indawo yokutya kunye nokudibana nosapho, ukonwabela i-grill kunye nabahlobo, okanye ingcwele yakho ukonwabela incwadi okanye ukhululeke emva kosuku olude oludinisayo.
Ipatio yegrabile yomxholo okwangoku kumfanekiso ongentla ivusa imo entle kunye necocekileyo, efanelekileyo yokuchitha imva kwemini ngaphandle. Yenza uninzi loyilo lwakho lweparavel yegrabile ngokubonelela ngefenitshala yangaphandle ephothiweyo, iidrapes ezingathathi hlangothi kunye ne-pergola emhlophe. Iimpawu ezihlaza okwesibhakabhaka ezisuka kwimiqamelo zongeza isiphumo sokuthomalalisa kwisitayile sonke sendawo
Phakathi kwezinto ezikhoyo kwimarike, igrabile yenye yezona ndawo zikhuselekileyo emhlabeni. Iyathandwa kakuhle ngenxa yeenzuzo ezininzi eziyinikayo. Ukuba ukhangele isisombululo esisebenzayo kunye nenye indlela eya kwipatio yamatye ebiza kakhulu, umgangatho wamaplanga okanye izitena ezinqamlezileyo, i-pea gravel yeyona ndlela unokukhetha ngayo. Yilale nangona ufuna njalo, nokuba wedwa okanye uxutywe kunye nezinye iindidi zamatye okanye ezibandakanyiweyo kuseto lomhlaba wakho. Kuba ikwabonelela ngokulula kufakelo, ukwenza ipatio yakho yegrabile inokuba yenye yeeprojekthi zakho ezilandelayo ze-DIY.
I-Gravel Patio Pros kunye ne-Cons
Yintoni i-Pea Gravel?
Ipea yeGravel Patio Border
I-Pea Gravel Iindleko zePatio
Iindlela zokwenza iPea Gravel Patio
I-Pea Gravel Epoxy Patio
Ityhubhu eqingqiweyo yeGravel
Paver kunye Gravel Patio
I-Flagstone kunye neGravel Patio
Isilayidi kunye neGravel Patio
Isitena kunye neGravel Patio
Gravel Patio Umlilo Pit
Ephakanyisiwe iGravel Patio
Uyenza njani i-DIY Gravel Patio
Amanyathelo ekwenzeni i-DIY gravel patio yekhaya lakho:
Uyilo lwePatio Designs
Nazi ezinye zezibonelelo zokuba nepatio yegrabile:
Ifuna ulondolozo oluncinci . Iipatios zegravel azidaka ngexesha lemvula.
Isebenza kakuhle emalini.Igravel ibiza ixabiso eliphantsi kunezinye izinto zokugcwalisa ezikhoyo kwintengiso. Xa kuthelekiswa nekhonkrithi kunye namatye amakhulu, igrabile ihlala ixabisa malunga ne- $ 35 ukuya kwi-55 yeedola.
Iphucula amanzi. I-Gravel idonsa ngokukhawuleza. Xa amanzi emvula ehamba ngaphezulu kwepatio yegrabile, ayangena kuwo kunokuba aqokeleleke. Ngokungafaniyo nezinye izinto zokugcwalisa ekufuneka zibekwe kwindawo encinci ukuze amanzi emvula angabi nakuphuma, igrabile inokubekwa njengoko kukwipatio.
Ulawula ukhukuliseko lomhlaba. Igravel namatye athintela umhlaba ungonakalisi ngokuwubamba endaweni.
Kulula ukudityaniswa kunezinye izinto ezizaliswayo.
Ithintela ukukhula kokhula .Ukhula olungafunekiyo alunakho ukukhula kumhlaba wegrabile. Ngokufanelekileyo, igrabile kufuneka ibekwe ubuncinci i-intshi ezi-4 ukutyeba emhlabeni ukuthintela ukhula ekukhuleni kwipatiyo yakho.
Ugcina iimpuku kude negadi yakho. Iimpuku azikwazi ukumba kumhlaba webhedi ngokungafaniyo nomhlaba.
Kulula ukuhamba. I-ertyisi ye-ertyisi ikakhulu ineengqukuva ezijikelezileyo ezigudileyo ngokuthelekiswa namatye amakhulu ngamanye amaxesha anemiphetho edibeneyo. Ayibangeli ukungathandeki nokuba uhamba ngeenyawo. Kuba yindawo ethambileyo ukuhamba kuyo, kuyanyamezeleka kunokuhamba kumatye amakhulu erhabaxa.
Kulula ukuyifaka. Iipatios zegravel zifuna umgudu omncinci kunye nezakhono zokuzifaka. Nokuba awunamava angaphambili, igrabile inokubekwa ngaphandle kwengxaki.
Ukukholisa ubuhle. Igravel ivumela ubuchule ngakumbi kuyilo. Inokudityaniswa ngokulula namanye amatye okanye izinto zokwakha umhlaba ukongeza ubuhle kumhlaba, igadi okanye ipatio.
Uncedo kwizityalo. Xa igrabile isetyenziswa kunye nezityalo okanye kwigadi yegadi ecaleni kwepatio yakho, igrabile ibamba ukufuma oko kubonisa ubushushu ngcono. Yeyona ndlela ilungileyo yokuthambisa ukhuko lomthi njengokugquma umhlaba.
Iphucula ixabiso lekhaya lakho. Ipatio yegrabile lulongezo olumangalisayo kuyo nayiphi na igadi ephucula ixabiso lekhaya lakho ngexabiso eliphantsi. Lutyalo mali olusebenzayo olunokunika izibonelelo ezininzi ekuhambeni kwexesha xa kuthelekiswa nezinye izinto zokugcwalisa.
Ihlala ixesha elininzi lamaxesha. Iipraos zegravel zinokumelana nayo nayiphi na imozulu okanye imozulu kubandakanya izivunguvungu okanye ikhephu. Umaleko wekhephu kwipatio yegrabile unokususwa ngokulula kusetyenziswa isitshisi seqhwa, umhlakulo okanye ityuwa. Ikwasebenza kakuhle kwimozulu eshushu njengoko ingadingi kunkcenkceshelwa.
Iipilati zeGravel zihlala ixesha elide . Igravel ayiboli kwaye iya kuhlala iminyaka.
Igravel elahlekileyo ijikeleze le ndawo ihleli ilitye eligangathiweyo kunye nomngxunya womlilo ophathwayo, ukudala indawo entle yokuphumla kunye nokuhlala.
Nazi ezinye zeengozi zokuba nepatio yegrabile:
Ukufuduka.Ukuba ucwangcisa ukutshintsha indawo yepatio yakho yegrabile, ngumsebenzi ekunzima ukuwulawula. Kuba yenziwe ngamatye akhululekileyo, yonke into ifuna ukuqokelelwa kwaye ihanjiswe ngononophelo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Ingozi kubantwana okanye kwizilwanyana zasekhaya .Iziqwenga ezincinci zamatye kwipatio yegravel zinokuba yingozi kwizilwanyana ezifuywayo okanye kubantwana abancinci. Qaphela ngakumbi ukuba unabantwana abancinci okanye izilwanyana zasekhaya.
Ayinakusetyenziselwa indawo ezigcweleyo zezithuthi. Amatye alahlekileyo kwipatio yegrabile anokungena ngokulula kwiziseko zezihlangu. Amatye amancinci anjenge-ertyisi ayicetyiswa ukuba isetyenziswe kwiindlela zokuhamba.
Igravel ingadluliselwa ngokulula okanye isasazwe kwezinye iindawo zaseyadini okanye ekhaya. Qiniseka ukuba usebenzisa i-edging okanye umda wepatio yakho ukuyikhusela ekusasazeni.
Ifuna i-raking ephindaphindwayo yokugudisa indlela. Iimpawu ezinamandla zibangela ukufakwa kwidrafti kwaye ngamanye amaxesha kunokutshintsha amatye amancinci enze indawo ebekucetywe kuyo. Thintela oku ngokubeka isiseko samatye kwipatiyo yakho ngaphambi kokubeka igrabile.
Ukuba ubeka ifenitshala kwipatio yakho yegrabile, ifuna isiseko esongeziweyo.
Ngamanye amaxesha, igrabile ifuna ukuphinda izaliswe kwiminyaka emi-3 ukuya kwemi-4 njengoko iqala ukungena emhlabeni.
Isitayile esingasemva kwendlu yaseAsia sinobume obuhambelanayo kunye negravel emnyama yepea kunye nefenitshala encinci kunye nokuhonjiswa.
Ipea yegrabile ngamatye amancinci afunyanwa kufutshane nemizimba yamanzi kwaye ibonakaliswa kukuthamba kwawo. Igama layo lalisuselwa kubukhulu bayo obufana nepea eluhlaza, ihlala iyimitha ezi-intshi ukuya kwii-intshi ububanzi. Imibala yayo ihlala imhlophe, beige, shades ezingwevu, irusi, emdaka, bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka okanye idlulile.
Ihlala isetyenziselwa ukulungisa umhlaba okanye ukutyala igadi kwaye ukusetyenziswa kwayo okuqhelekileyo ziipatios, iindlela, iidriveways, amabala okudlala, iipavile zokugcwalisa okanye njengesixhobo se-mulch esijikeleze izitya zezityalo.
UKUYA I-ertyisi yegravel patio lunyango lwendawo engaphandle okanye indawo egangathiweyo edityaniswe kwindlu apho ubukhulu becala igutyungelwe ngegrafu. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza ipatio yegrafu. Ngamanye amaxesha ixutywe nezinye izinto ezinje ngeepheyinti, izitena, isileyiti okanye ilitye lelitye lokufaka isibheno esibonakalayo. Ezinye izinto zokulungisa umhlaba ezinje ngezityalo, ibhedi yegadi, inqaku lamanzi okanye umngxuma womlilo unokongezwa kwipatio yegrabile.
Ipea iigravel patios zilungele amakhaya aseYurophu okanye imihlaba ephefumlelweyo yeMeditera. Igravel emhlophe ye-ertyisi isebenza kakuhle kwiipatios zakudala ezinikezela ngokuziva kungenasiphelo. Ilungele nasiphi na isitayile somhlaba ngenxa yemibala yaso.
Iindidi ezimbini zeengqalutye zegrabile zenza le gadi intle yelitye laseJapan egcwele iindlela zokuhamba zomthi ezikhokelela kwisiqithi sengca.
Umgodi womlilo wepatio ungakhiwa ecaleni kwekhaya lakho njengendawo yokonwabisa iindwendwe kunye nokuqokelela amalungu osapho. Uyilo oluqhelekileyo lwe-rustic lusebenzise izitena zokudibanisa izitena ezisuka kwiindonga zomngxuma womlilo kunye namatye amakhulu erhabaxa njengokugcwalisa izinto kwindawo ejikelezileyo. Izinto ezifanayo zomgangatho ohamba ngokuqhubekayo kwindlela enika indawo indawo yokujonga ngakumbi.
Umda we-ertyisi weepea yinto yokuhlela ebekwe ejikeleze umda wepatio yegrabile. Eyona njongo yayo kukuqulatha amatye kwindawo enye. Ngaphandle komsebenzi owunikezelayo, umda wepatio wegrabile wongeza ubuhle kunye nesibheno sobuhle kwipatio yakho ngokuchaza.
Ezinye zezinto zokuhlela ezinokusetyenziswa njenge-patio odolo zizitena, amatye, amatye eenkobe, amatye eflegi, isinyithi, intsimbi kwalenza, iplastiki, ibhodi ye-bender, umsedare okanye umthi ophathwayo. Ezi zinto zinokufunyanwa kwiivenkile zokuphucula ikhaya.
Xa ukhetha izinto eziphathekayo kumda wakho wepea weparati, khumbula ukukhetha into enomgangatho olungileyo. Sukukroba kwimathiriyeli yokuhlela njengoko iza kuhlala ixesha elide.
Ngokubhekisele kubungakanani bomda wepea weparati umda, ukuphakama kwawo kufuneka kudlule kubunzulu bokumbiwa kwepatio yakho. Iqheleke njenge-intshi ezi-intshi ngaphezulu kwendawo yakho embiweyo kodwa obu bungakanani buhlengahlengiswa ngokokukhetha kwakho.
Igravel inokusetyenziselwa ukugubungela iindawo ezinkulu zeendawo ezingasemva kwendlu ukubanika imvakalelo yendalo ngakumbi. Iipavumente zelitye lekalika zisetyenziswa njengendlela yokuhamba kwaye njengesixhobo somgangatho wendawo yokuhlala yangaphandle. Umxholo weRustic wale paver kunye nepea yegrabile yepatiyo iyongezwa ngumbala ofudumeleyo womhlaba wamatye asetyenzisiweyo.
Iindleko zezinto eziphathekayo zepravel zihlala zihluka ngokuxhomekeke kubukhulu beprojekthi. Kwiiprojekthi ezincinci, ipevel ​​gravel ihlala ixabisa malunga ne- $ 300 ukuya kwi-400 yeedola kwisikwere seenyawo ezingama-200. Kuba iiprojekthi ezincinci zineemfuno ezincinci zezinto, i-ertyisi yegrafu inokufunyanwa kwiivenkile zokuphucula ikhaya. Ukuthengwa kwegrabile kwiingxowa ze-0.5 zenyawo zecubic malunga ne- $ 4 ukuya kwi- $ 6 ngengxowa nganye yamatye acacileyo kunye ne- $ 8 yokwahluka kwemibala. Nangona kunjalo, le ndleko isahluka ngokuxhomekeka kwindawo.
Kwiiprojekthi ezinkulu, i-ertyisi yegrafu kufuneka ithengwe kugcino-mhlaba okanye kumthengisi wegrabile kunye nelitye kwiitoni okanye kwiiyadi zetyhubhu. I-Plain gravel gravel ixabisa malunga ne-30 ukuya kwi-35 yeedola kwiyadi nganye, okanye i-40 ukuya kwi-45 yeedola kwitoni nganye. Ukuba ukhetha iindidi ezinemibala, jonga imali eyongezelelweyo ye- $ 20 ukuya kwi-50 yeedola kwiindleko zakho. Ukuthenga ngobuninzi kungakongela ngaphezulu kuba ixabiso linokuya liphantsi njenge- $ 15 ukuya kwi-20 yeedoni ngetoni ubuncinci beetoni ezili-10. Unokufumana ukuthengiswa okuthengisela abathengisi ngegrabile ukuba unayo le mali yezinto ezifunekayo.
Ngokubhekisele kufakelo, ipatio yegrafu enepea inokubiza malunga ne- $ 5 ngonyawo wesikwere, kubandakanya ilitye lesiseko. Eyona projekthi inkulu, kokukhona inkcitho ongayifumana.
Eminye imiba eyongezelelweyo echaphazela iindleko zepatiyo yegrafu yeepea yile:
Uhlobo okanye uhlobo lwelitye- Olona hlobo lwexabiso leepea lubiza kakhulu yile inemibala eqinileyo. Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, ukukhetha uhlobo olunombala wamatye kungabiza ngaphezulu. Amatye ajikeleziweyo kunye nangaphezulu ayabiza kakhulu.
Ubunzulu bepati ye-ertyisi ye-ertyisi-Ubunzulu bepati yomgubo we-ertyisi ngokwendalo ichaphazela ubungakanani bamatye oza kuwufuna ukuwugquma. Ubunzulu, ixabiso liphezulu. Iipatios eziza kusetyenziswa kuphela njengeendlela zokuhamba, i-intshi e-1 yegravel yanele. Ubunzulu bee-intshi ezi-2 ukuya kwii-intshi ezi-4 ziyafuneka kwizitiya ezinezityalo ngelixa ii-intshi ezi-6 ziyafuneka kwiipatios ezinefanitshala.
Umda okanye izinto zokuhlela -Ukujikeleza ujikeleze ipatio yegrabile kubalulekile ukuyigcina isendaweni. Izinto ezijikelezayo zomthi zihlala zibiza i-5 yeedola kwimitha ehambelana kunye nezinto zokujikeleza zentsimbi zihlala zibiza i-6 yeedola kwimitha nganye.
Ezabasebenzi -Ukuzifakela ngokwakho ipea yomgubo we-ertyisi kungakongela imali efanelekileyo, nangona kunjalo, ukuba ukhetha ukuqesha umntu oza kwenza lo msebenzi, jonga imali eyongezelelweyo ye- $ 13- $ 65 ngeyure kwiindleko zabasebenzi. Ukubeka phantsi igrabile kuhlala kuthatha iiyure ezi-2 ukugqibezela okanye nangaphezulu.
Iirhafu zokuhambisa-Abanye abathengisi banikezela ngokuhanjiswa simahla kwii-odolo ezinkulu zeetoni ezili-10 ukuya kwezi-20. Iintlawulo zokuhanjiswa kuxhomekeke kumgama, cela umthengisi wakho ukuze unike uhlahlo-lwabiwo mali oluthile loku.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza ipatio yegrafu. Ngenxa yokuguquguquka kwegrafu, inokudityaniswa namanye amatye okanye izinto zokulungisa umhlaba ukuvelisa uyilo lwepatio olulungele incasa yakho.
Ubuninzi boku kwahluka kweeparadise zegrabile kufuna isiseko senqanaba kwaye kusetyenziswa indlela eyomileyo yokubeka.
Apha ngezantsi kukho iindidi eziqhelekileyo zepatiyisi yegrafu:
Indawo entle yokonwabela i-barbecues zangaphandle kunye namaqela, le pea gravel epoxy patio inesikhululo sokugcoba kunye netafile yokutyela. Umahluko phakathi kwegrabile yepea kunye nesikhululo sokupheka samatye esanti sisebenza ngokugqibeleleyo kule ndawo yanamhlanje.
Ipea yamatye epoxy patio, njengoko igama lisitsho, yenziwe ngezinto ezimbini: i-ertyisi kunye ne-epoxy. I-Epoxy isebenza njenge-arhente ebophelelayo ukuze kugcinwe amatye egudile kwaye alungelelaniswe nepatio. Xa ezi zinto zimbini zixubekile, zenza izinto zomgangatho omeleleyo ezinokubonelela kwiindawo eziphezulu zezithuthi.
Olu hlobo lwepatio luyakhawuleza kwaye kulula ukwenza. Ukufaka i-ertyisi yerax epoxy patio ngokusisiseko kukuxuba igrabile kunye ne-epoxy kwaye uyisasaze.
Ukusekwa njengegumbi lokuhlala langaphandle elithandekayo, le patio yamangcwaba ivusa ilizwe eli-rustic kodwa elidala. Umbhoxo wendawo wongeza ubuqaqawuli kuyo yonke indawo.
Lo ngumzekelo woyilo lwasemva kweeyadi ezincinci kunye nepatio yegrabile ecoliweyo enomngxunya womlilo. Ukugqitywa kwekhonkrithi okucacileyo kwebhokisi yokutyala ephakanyisiweyo kunye neenkuni zendalo zocingo zibonelela ngobuhle obukhethekileyo kwimbonakalo engagqitywanga ngokubanzi yale patio.
Ipatio yegrabile etyunjiweyo yenziwe ngamatye acoliweyo okanye uhlobo lolwakhiwo oluqhelekileyo olu-1 1 intshi ukuya kwi-2 ½ intshi ngobubanzi. Amatye atyunyuziweyo aveliswa ngokwaphula ilitye elithile elifana negranite, ilitye lekalika, ilitye lemarmore okanye ilitye lokurhintyela kubungakanani obunqwenelekayo. Amatye atyumkileyo anje ngee-chips ezimhlophe zemabhile zilungele iigadi eziphefumlelweyo zakudala.
Igrabile etyunyuziweyo ihlala isetyenziswa njengesiseko esithembekileyo samatye kuba inokubumbana kwaye inokuxhasa ubunzima befanitshala yangaphandle. Ngaphandle koku, ikwasebenza njengesigqubuthelo somhlaba esifanelekileyo kwiipatios ngenxa yendalo kunye nokujongeka kwendalo esikunika indawo. Ikwafikeleleka kwaye kulula ukuyigcina.
Njengama-patio e-ertyisi, iiposti zegrabile ezicoliweyo kulula ukuzifaka ngokusasaza amatye ngaphezulu.
Indawo ehleliwe yegrabile ehleliweyo enezitulo zangaphandle zesinyithi ezijikeleze isitya esikhulu somlilo.
Umgodi womlilo wepatio yomlilo usebenza njengokongeza okhangayo kuyo nayiphi na indawo yangasemva. Nokuba yeyokukhula njengechitchat okanye ukudibana nabantwana kukosa i-marshmallows, iba yindawo oyithandayo kusapho. Kuyilo olu, ubungakanani obahlukeneyo kunye nemibala yamatye asetyenzisiweyo kuyo yonke indawo iyinika ubunzulu kunye nobukhulu.
Le patio incinci isetyhula yetyhubhu egudileyo ime kwikona ekumva kwendlu kwaye ingqongwe ngamatye eepavumente kwaye ixhotyiswe ngetafile yeenkuni kunye nesambrela.
Amatye okuhamba ekhonkrithi ekhonkrithi akhokelela kulomhlaba wegravel ongasemva ukuya kwibhentshi yepaki kwindawo entle yokuthatha ukuzola kwegadi.
Lo mzekelo usebenzisa igrabile emnyama etyumkileyo kunye neepavile ezinkulu zekhonkrithi ezikhokelela kumnyango wokungena wale mihla.
Le ndlela yegrabile ityunyuziweyo ikhokelela kulwakhiwo olukhulu lweplanga elinophahla olungqatyisiweyo, indawo yokubasa umlilo kunye nendawo yokuhlala engaphandle. I-pergola eyenziwe ngomthi ibonelela ngendawo eyongezelelweyo yokonwabisa kunye nokuhlala.
Le ndawo ilula yangasemva ye-DIY inendawo engacacanga enegrabile enezihlalo zeAdirondack kunye nomda wamatye amakhulu asikwe ngokungaqhelekanga. Kukho indawo yokuhlala yesibini eyenziwe ngeebhloko zekhonkrithi kunye neseti yokutya yangaphandle.
unganxiba mnyama namhlophe emtshatweni
Ipatio yegravel yasemva kwendlu inikezela ngendawo yokuhlala yokumema epheleleyo nefenitshala yangaphandle kunye nomgodi omncinci wesinyithi.
Iipavile zinqunqa amatye eflegi kwiiyunithi ezingaqhelekanga okanye zesikwere. Iiparaver zegrabile kunye negrabile ziyindibaniselwano yamatye aqokelelweyo ahlelwe kwipateni ethile kunye namatye amancinci asetyenziselwa ukugcwalisa izikhewu eziphakathi- cinga ngegrabile yepea esebenza njengegrout yeepheyiji.
Ipeyinti kunye negravel lunyango olomeleleyo nolufikelelekayo kwiipatios. Ukudityaniswa kwezi zinto zimbini kunika amathuba okuyila okungapheliyo ngenxa yobukhulu obahlukeneyo, umbala kunye neepavoda zemilo ezinazo.
Ukufaka ipavumente kunye neparavel yegrabile kusetyenziswa indlela eyomileyo apho iipeyinti zomile khona kunye nesanti elityeni naselwandle kunye nepera gravel isasazeka kuyo yonke indawo ukuzalisa izithuba eziphakathi.
Ipeyintiwe kakhulu, eli litye lesiko lendabuko kunye nepatio yegrabile zisebenzise indibaniselwano yamatye erhabaxa, amatye amakhulu agudileyo kunye nelitye lekalika. Umahluko kumbala wamatye, ubungakanani kunye nemilo yenza ubunzulu kunye nomlinganiso woyilo lwepatio.
Ilitye lelitye lilitye elisisicaba lesileyiti, ilitye lentlabathi okanye ilitye lekalika elixande okanye limile okwesikwere lisetyenziselwa ukupheyiva. Yinto ekhethiweyo yeepatios ngenxa yamalungu ayo amxinwa apakishwe. Amatye eFlegi eza ngemibala eyahlukeneyo enje ngwevu, brown, bomvu okanye luhlaza. Ihlala ixabisa malunga needola ezili-15 ukuya kwezingama-30 ngeenyawo zesikwere.
Iflag yelitye kunye neepea zegrabile zakhiwe ngendlela eyomileyo apho amatye amakhulu abekwe khona ebhedini yesanti okanye i-ertyisi. Ubunzulu bokucetyiswa koku zii-intshi ezintathu. Indawo embiweyo yepatio izaliswe sisanti erhabaxa kunye negrabile emva koko kufakwe amatye eflegi kwipateni ethile. Amalungu azaliswe ngumhlaba okhethiweyo okhethiweyo okanye ngamanye amaxesha, afakwa okanye atyalwe ngengca.
Iflegi yelitye kunye neepatios zegrabile zinembonakalo yendalo kunye nezinto eziphilayo kwaye zisebenza kuzo zombini iindlela ezisesikweni nezisesikweni zoyilo. Ukuba ujonge ukuseta okungaqhelekanga, sebenzisa amatye eflegi angacwangciswanga kwaye uzilungiselele kwipateni engahleliwe. Ngelixa uncike kwi-vibe esesikweni ngakumbi kwipatio yakho, beka amatye eflegi yoxande kwipateni efanayo.
Isilayiti esingwexande esingwexweyi esibekwe kwimodeli enje ngokunika le slate kunye nepati yegrabile indawo ekugxilwe kuyo.
Isilayidi lilitye eliluhlaza oluhlaza, oluhlaza okwesibhakabhaka, neligrey rock. Ihlala ithengiswa nge-18 ukuya kwi-30 yeedola ngeenyawo zenyawo. Nangona kubiza ukuya kuthi ga kathathu kunezinye izinto ezenziwe ngeepavumente, isileyiti iseyinto ethandwayo ngabagcini mhlaba kunye nabanini bamakhaya kuba ijongeka indalo, yomelele kwaye yomelele.
Isilayidi esimile ngokungaqhelekanga sinika iipatiyo kunye negadi umdla onomdla kunye no-eclectic. Ukudityaniswa kwesileyiti kunye negrabile kusebenza ngokugqibeleleyo kumakhaya aphefumlelweyo eMeditera kunye neegadi ngokubanika umtsalane.
Njengoninzi lweentlobo zeeparati zegrabile, isileyiti kunye nepatios zegrabile zisebenzisa indlela efanayo eyomileyo yokubeka apho iziqwenga zesilayidi zicwangciswe kwipateni ethile kwaye zigcwaliswe ngamatye amdaka aphakathi kwamalungu. Ngexesha lofakelo, kulungile ukuqala kwikona ngelixa ugcina izikhewu ubuncinci. Xa isileyiti sisetwe ngokupheleleyo kwisiseko sesiseko sezinto, thintela isiqwengana ngasinye ngemallet kwaye uthele isanti ukuze ugcwalise izikhewu emva koko wongeze ingcwaba njenge-topper.
Imibala emibini yegrabile isetyenziselwa ukwenza umahluko kunye nokuthelekisa kuyilo lwepatio. Izitena zisebenza njengezinto ezijikelezayo kunye nomda wokuchaza indawo. Le patio yezitena kunye negravel idityaniswa ngokugqibeleleyo nomhlaba ojikeleze iMeditera ophefumlelweyo.
Izitena ngokwesiqhelo zincinci ezomileyo iibhloko zoxande ezenziwa ngodongwe. Ihlala isetyenziswa njengezinto zokwakha iindonga kunye neendlela zokuhamba. Izitena zinokubekwa ngokusondeleyo kunye ngelixa iipeyinti kwelinye icala zinxibelelana kwaye ziyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu.
Ipatio yezitena kunye negravel yonyango oluqhelekileyo nolungekho sesikweni kumabala angasemva kunye neendawo zokuhlala zangaphandle. Ayilandeli ukusika ngokuchanekileyo kwaye inendlela yasimahla yoyilo. Xa kuziwa kufakelo, olu hlobo lwepatio lulandela amanyathelo afanayo nepavivili kunye nepati yegrabile, isileyiti kunye nepati yegrabile kunye neflegi yelitye kunye negravel yegravel. Isebenzisa indlela eyomileyo yokubeka izitena ibekwe ebhedini yesanti emxinwa kwaye iintanda zizaliswe luhlaza lwepeya.
Isitena kunye negravel patios zilungile ukongeza ukufudumala kwindawo ngenxa yombala obomvu nombala.
Ukuba ufuna ukusebenzisa iyadi yakho yangasemva yokuphuma ngaphandle okanye ukubamba ukufudumala ngexesha lamaxesha abandayo emva koko unokongeza umgodi womlilo kwipatiyo yakho yegrabile. Ngokwesiqhelo ijikeleze imilo kwaye yenziwe ngamatye, umgodi womlilo usebenza njengeyona nto iphambili kwipatio.
Umgodi womlilo ulula kakhulu ukufaka. Yenziwe ngokudibanisa iziqwenga zamatye kunye ukwenza imilo ejikelezayo. Ukuphakama okwaneleyo kuhlala kumanqanaba ama-3 ukuya kwayi-4 okanye iikhosi ezigcweleyo zamatye ezidityaniswe sisincamathelisi okanye udaka. Emva koko i-pea gravel yongezwa njenge-topper kuwo wonke umhlaba ongqonge umngxuma womlilo.
Kule ndlela yeMeditera iphefumlelweyo eyilelwe uyilo lwepatio, umgodi womlilo awakhelwanga ngaphakathi kwaye unokushenxiswa ngokupheleleyo. Igravel emdaka enobungakanani egubungele umgangatho wepatio yenza umahluko omkhulu ngokuchasene nengca ejikelezileyo kunye nedama lokubhukuda.
Ipatio yegrabile ephakanyisiweyo yindawo yangaphandle ephakanyiswe kumhlaba ojikelezileyo okanye eyakhiwe kwinqanaba eliphezulu kunomhlaba okhoyo.Ufakelo ngobulumko, ilandela amanyathelo afanayo ekwakheni ipatio yegravel kodwa ngeyinyathelo elongezelelweyo lokwakha udonga lokugcina.
Udonga lokugcina lwakhiwe ecaleni kwepherimitha kwaye lisebenza njengomda wegrabile. Inokuba zizitena, ukhuni okanye nayiphi na into okoko inokuthi isebenze njengeqonga lepatiyo kunye nomqobo kumaqhekeza amatye amancinci azalisa isiseko sepatio.
Olu hlobo lwepatio lufuna izinto ezizalisa ngakumbi kwaye zihlala zii-intshi ezi-4 ukuya kwezi-9 ukuphakama. Ingasetyenziselwa ukuba ufuna umgangatho wakho wepatio ube kwinqanaba elifanayo nomgangatho wendlu yakho okanye ukuba ufuna nje ukongeza ubukhulu kunye nokuphakama kwindawo yakho yangaphandle.
Igadi yangasemva kwegadi ibonelela ngendawo yabucala yokuphumla kwindawo yokulala ngaphezulu kwebhedi yegrabile eneqonga elincinci leenkuni.
Xa kuthelekiswa namatye, izitena ezidibeneyo okanye iplanga lomthi, ipatio yegrabile ifuna umgudu omncinci xa kufikwa kufakelo. Kungayinto elula ukuyenza ngokwakho kuba ayifuni zakhono zikhethekileyo okanye naluphi na ulwazi lobuchwephesha.
Ubungakanani bepea (okanye nabuphi na ubungakanani begrabile oyifunayo, isixa siya kuxhomekeka kubungakanani)
Indwangu yokuma komhlaba
Ilitye elityumkileyo (okanye nasiphi na isiseko sesiseko)
Izinto zokuhlela (zinokuba ngamatye, isinyithi, ukhuni okanye iplastiki)
Imiqolo yebhloko yokhula
Izibonda (ukuba ziyafuneka)
Indawo eqaqambileyo nenomtsalane yokuphumla, le patio yamatye erayisi inika umbono opheleleyo wegadi ejikelezileyo. Ipatheni emibala eshicilelweyo yefanitshala kunye neepensile zomqamelo ngokukhawuleza ziyakhanyisa indawo.
Cwangcisa ubungakanani kunye nokumila kwepatio yakho. Xa kuziwa kuyilo kunye nemilo, unokukhetha nantoni na ehambelana nesimbo sakho. Eli nqanaba linika inkululeko yokusebenzisa ubuchule bakho kwaye ikunike ubhetyebhetye ekwakheni umxholo ogqibeleleyo wepatio yakho. Ubungakanani, kwelinye icala, buya kuxhomekeka kakhulu kwiimeko ezikhoyo ezingasemva kwendlu yakho kunye nezinye izinto.
Ubungakanani bendawo oyifunayo kwipatio yakho yegrabile iya kuxhomekeka kakhulu kwinjongo oceba ukuyisebenzisa ngayo. Chonga imisebenzi oza kuyenza apha, inani labasebenzisi abakule ndawo kunye nendlela ofuna ukuyinikezela ngayo.Iindawo ezincinci zilungele ipasto yesitayile se-bistro esimiselweyo esiqulathe ubuncinci izitulo ezi-2 kunye netafile.
Izithuba ezinkulu, kwelinye icala, zinokuhlalisa ngakumbi ifanitshala kunye nezinto zoyilo. Kwezinye iimeko, inokuyilwa njengendawo yokuhlala yangaphandle epheleleyo kunye nomgodi womlilo. Khawukhumbule nje ukuba uceba ukubeka indawo yokutyela engasemva kwendawo okanye indawo yokuhlala yangaphandle, qwa lasela ubungakanani befenitshala oya kuyisebenzisa.
Umzekelo, ipatio ene-12 ukuya kwi-14 yeenyawo ngobukhulu inokulungiselela itafile engama-intshi ezingama-48 ezinokuhlala abantu abayi-6 ukuya kwabasi-8 ngokuxhomekeke kubungakanani besihlalo. Gcina ukhumbula ukuba ubungakanani kufuneka bulungelelanise nokusingqongileyo. Cinga umlinganiso kwaye uqiniseke ukuba imilo iyahambelana kakuhle nomhlaba.
Cwangcisa ubume bepati yakho eyadini . Linganisa isithuba esele sikhona ngetheyiphu yokulinganisa uze ucebe imilo oyifunayo nobungakanani bayo engceni usebenzisa ipeyinti yokutshiza. Unokusebenzisa ezinye izinto ukuphawula isithuba.
Qinisekisa ubunzulu begrabile. Nje ukuba kugqitywe injongo yepatio, unokwazi nokwazi ubunzulu bepati yakho yegrabile. Ubunzulu bexabiso legrabile yepatio ihlala isusela kwi-intshi enye ukuya kwii-intshi ezi-4. Ngokwesiqhelo ubunzulu obuqhelekileyo bee-intshi ezi-2 banele, kodwa oku kuyatshintsha kuxhomekeke kwiimeko ezikhoyo zomhlaba womhlaba.
Ukuba umhlaba awuzinzanga, kukho imfuneko yokomba nzulu. Uhlobo lwesiseko okanye isiseko ekufuneka sisetyenzisiwe luya kugqiba ubunzulu bomngxunya owufunayo kwipatio yakho yegrabile. Ukuba usebenzisa umhlaba wesiseko, gumba ii-intshi ezi-2 ubunzulu kodwa ukuba ukongeza ilitye lesiseko, gumba umngxunya onzulu nge-4 ukuya kwi-4 ½ intshi.
Yenza isixa semali yegrabile efunekayo yokugubungela ipatio. Ukuze wazi isixa segrabile esifunekayo ukugubungela ipatio, iyadi yeekhabhi kufuneka imiselwe. Okokuqala, fumana indawo epheleleyo yepatio yakho kwiinyawo zesikwere ngokuphindaphinda ubude nobubanzi bendawo (kwii-intshi). Yahlula indawo iyonke nge-12 ukufumana i-cubic intshi yevolumu. Phindaphinda inani elisisiphumo ngenani lee-intshi ozifunayo ukutyeba kwegrabile.
Kuba isixa sokugubungela igrabile kufuneka sibe kwiyunithi yokulinganisa iiyubhi iyadi, guqula isiphumo esipheleleyo ngokusahlulahlula ngama-27. Sondeza oku uye kwelona nani likufutshane ukuze ufumane uqikelelo lwegrabile oyifunayo ukugubungela. Kukho iikhaltyhuleyitha zegrabile ezikhoyo kwi-intanethi ezinokukunceda ukuba ubale iimfuno zakho zoko nangoko.
Lungisa indawo. Coca indawo ngokususa ukhula kunye nokutshiza ngesibulali sengca xa kufuneka njalo. Susa izithintelo okanye inkunkuma efana neengcambu, izinti, amatye, njl.
Yomba indawo. Bamba indawo ngobunzulu obufunayo. Njengokuba usomba umhlaba, vavanya imeko, ubume bomhlaba kunye nokuhambelana komhlaba. Ukulinganisa ukungcola kwaye uqiniseke ukuba umhlaba uthambekile. Sebenzisa igaba okanye umhlakulo ukudibanisa umhlaba ongezantsi kwendawo yakho egrunjiweyo. Nokuba usebenzisa umhlaba okanye ilitye elityumkileyo njengesiseko sakho, kubalulekile ukuba ungatsiba eli nyathelo.
Yongeza ukuhlela okanye umda kwi-perimeter. Khetha uhlobo lwezinto zokuhlela kwipatio yakho yegrabile ukuze uqulethe iingqalutye endaweni enye. Umzekelo, ukuba usebenzisa ukhuni njengesithintelo segrabile, sika iziqwenga zeeplanga ze-2 × 2 ngokobungakanani kunye nobungakanani bepati yakho. Beka iinkuni kwaye uqhagamshele iikona okanye uphele ngokubambisa. I-Adhesive ingasetyenziselwa ukudibanisa iinkuni kunye ngokulula nangokufanelekileyo. Vumela iziqwenga ezihlanganisiweyo zomile kwaye ziqinisekise ukuba zikhuselekile.
Yongeza isiseko okanye isiseko sesiseko. Umhlaba opakishwe ngokuxineneyo kwaye nodongwe olufana nokungaguquguquki awudingi maleko ungaphezulu welitye. Kodwa kumhlaba ovulekileyo okanye oyisanti, yongeza amatye acoliweyo ukugcina igrabile ikwindawo. Amatye aqingqiweyo asebenza kakuhle njengezinto ezizinzileyo zepatio yegrabile.
Ngaphambi kokubeka igrabile, beka ilaphu lomhlaba ngaphezulu kwesiseko sesiseko. Ilaphu lokulungisa umhlaba lisebenza njengomqobo womhlaba owahlula ubumdaka kunye negravel. Ikwanceda ekuthinteleni ukukhula kokhula kwaye igcina iimpuku zingomba emhlabeni.
Ukuhonjiswa kwetafile kulwamkelo lomtshato
Yongeza i-pea gravel kwipatio yakho. Thela ii-intshi ezimbini zepravel kwaye usasaze ngokulinganayo. Shiya isithuba se-intshi ezi-intshi phakathi kwegrabile kunye nokujikeleza ukunqanda amatye amancinci ukuba angachitheki.
Umgangatho uphume ngeharika. Thatha ixesha lokugudla kwaye ude uphume nomphezulu wepati yegrabile ngerakhi. Oku kuyayicinezela ukuze ingqalutye evulekileyo ihlale endaweni.
Ezinye izinto onokuzigcina engqondweni xa ufaka ipatio yegrabile:
Ukuba usebenzisa ifenitshala yangaphandle kwipatio yakho, nikeza isiseko esiqinileyo. Yongeza ubuncinci ii-intshi ezi-6 zamatye aluhlaza ukuxhasa ifanitshala yakho. Izinto ezongeziweyo kuyilo lwakho lwepatio ngokwendalo ziya kubangela utshintsho olufanelekileyo kubunzulu bomhlaba ekufuneka umbe kuwo kunye nenani legrabile oyifunayo.
Ulondolozo. Ukugcina ipatio egreyini ye-ertyisi kuya kufuna ukurhatyela ngamanye amaxesha nkqu nomphezulu wethu. Gcwalisa i-pea gravel patio yakho yonke iminyaka emi-3 ukuya kwe-4.
Iipavili zamatye zinokucwangciswa kwiipateni ezizodwa ezinje ngale iboniswe ngasentla. Ngokwenene akukho mda xa kufikwa kumba wokuyila ipatio yegrabile. Yisebenzise njengendawo enomdla ekujongeni indawo yakho.
Yamkela ukuhlala ngaphandle kwaye uphefumlelwe kwigalari yethu yeengcamango ezahlukeneyo zoyilo lwegravel.
Iiparaver ze Paver kunye ne gravel zisebenza kakuhle ekuchazeni indawo. Indawo yokuhlala yahlulwe ngokusebenzisa iipeyinti zesamente njengezinto zokwakha. Ukusetyenziswa kwefanitshala yesinyithi esenziwe ngokulula kunye notyani obuncinci ayenzi le patio yemveli ukuba ibe nzima.
Olu gcina lungemva kwendlu lubonisa ipevel ​​gravel esasazeke kwimithi yesundu emininzi kunye nehammock eyoluliweyo yokubaleka ukuphumla.
Amanqwanqwa okudibanisa afumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu obungasetyenziselwa ukufezekisa iikhonsepthi ezahlukeneyo zasemva kwendlu yakho. Igravel enkulu erhabaxa exutywe kwimibala engwevu, emdaka ngombala kunye nomhlophe yongeza umlinganiso kule paver iphefumlelweyo kunye noyilo lwegrabile.
Ukubhaskita kwiitoni eziluhlaza ezipholileyo, le patio yezitena kunye negrabile evusa imvakalelo ezolileyo. Umxholo we-organic wale ndawo yegumbi lokuhlala ngaphandle uphunyezwa ngokudibanisa izityalo kunye nokuzaliswa kwamatye kunye nokuyila okuhambelana nodonga.
Uyilo lwekhonkrithi kunye negravel esekwe ngocingo oluthe tyaba ngomthi, esi sithuba sibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ngokusetyenziswa. Iyakwazi ukulungiselela iindibano zangaphandle njengoko ziza kunye nomlilo.
Ubunzulu benziwe, olu luyilo ngumzekelo wekhonkrithi ephefumlelweyo yeMeditera kunye nepatiyo yegrafu. Gcwalisa nge-rustic ye-trellis yokhuni kunye nefenitshala yentsimbi eyenziwe ngaphandle, indawo engaphandle ivusa imvakalelo yokucela. Ukongeza umahluko kwimfudumalo yokwahluka kobume bezinto, kwaziswa indawo eluhlaza okwesibhakabhaka.
Paver encinci kunye noyilo lweparavel yegrabile, oku kusetyenziswa kweebhloko zekhonkrithi ezikwisikwere kunye ne-ertyisi yegreyidi ethathiweyo. Ipatio ayisoloko ifuna ifanitshala kwaye noyilo olulula lunokusebenza njengokongeza ngokubonakalayo ekhayeni lakho.
Ipatio enomdla wegrabile inendawo yamanzi echibi egcwaliswe ngeephedi zeenyibiba kunye nomda weenkuni. Itafile yokutyela yangaphandle ibekwe ukuvumela abahlobo kunye nosapho ukuba batye kwaye bonwabise.
Igravel kunye nelitye eligudiswe ngasemva ngamatye ajikeleziweyo agcina imithi yesundu kunye neentyatyambo.
Le patio yesitayile yanamhlanje ineepavali zekhonkrithi ezingaphezulu kwesayizi kunye namatye amakhulu angwevu. Olu luyilo lwepatio luzalisa ukujonga okuncinci kwendlu kunye nocingo oluphakamileyo lomthi olungqongileyo.
Le patio encinci ipholileyo ineeslabs zamatye ezikwere kunye nomda okanye igrabile emhlophe. Ifenitshala yentsimbi eyenziwe ngesinyithi isenza ukuba ibe yindawo entle ukonwabela ikofu yasekuseni okanye uphumle emva kosuku olude.
Uyilo lwale patio lwanamhlanje olusebenzisa iipavile ezinkulu zekhonkrithi zokuhamba kunye nokudityaniswa kwegravel yamatye kunye namatye amakhulu omlambo. Olu luyilo lubonisa ukusebenza kwezinto ezijikelezayo zepatiyo njengoko ibonisa ngokucacileyo ukuba ichaza iindawo ezahlukeneyo zesithuba. Inkangeleko encinci encinci igqityiwe ngezitulo ezilula, umngxunya womlilo ohlaziyiweyo kunye nepop yemiqamelo enemibala.
Uhlobo lwendabuko lufezekiswa kuyilo lwepatio ngokusebenzisa indibaniselwano yamatye amhlophe nangwevu wepeyinti ngesileyiti esimile ngokungaqhelekanga. Ifenitshala ye-Wicker kunye nezitya zamatye ezakhiwe ngamatye zaguqula eli patio laba yindawo ethe cwaka yokuphumla.
Indawo ecekeceke yokurhabaxa yokuhlangana kunye nabahlobo okanye usapho, olu luyilo lweparavel yegrabile lusebenzise amatye amakhulu angaqhelekanga emgodini womlilo kunye negravel encinci ye-ertyisi yomgangatho. Indawo yokuhlala idityaniswe kakuhle nomhlaba ojikelezileyo ngokusebenzisa ingqokelela yelitye kunye neminye imiqamelo yokugxininisa.
Umzekelo wepati kunye nepatio yegrabile, olu luyilo lubonisa isileyiti esisetiweyo kwipateni efanayo kunye nokuzaliswa kwamatye eengwevu. Olu luyilo lusemthethweni ngakumbi kunamatye angaqhelekanga kwipateni engahleliwe.
Ukuthatha ngokulula kwipatio yomgodi womlilo wegrabile, olu luyilo alunazo iifrills ezininzi kwaye lusebenzisa ngokupheleleyo umbono ojikelezayo ojikelezayo. Gcwalisa umhlaba ngegriki enobungakanani kwaye uyigxininise ngamaqhekeza amakhulu esilayidi kwaye ipatio yakho iya kuhlala ibonakala.
Indlela encinci kwi-patio yomgodi womlilo, olu luyilo lusebenzise umngxuma womlilo osikwere kunye nokuzalisa iibhentshi zokhuni kunye nezityalo ezilula. Iipavile zekhonkrithi ezilungelelanisiweyo kunye negravel erhasi erhabaxa igqibezela inkangeleko yangoku yale ndawo ingaphandle.
Uyilo oluphakamileyo lwepatio lwenziwe ngekhonkrithi kwaye lusetwe ngesanti engwevu egreyiniweyo. Izinto ezisetyenzisiweyo kule patio zenza umahluko ocacileyo ngokwendlela yoyilo olusetyenziselwa indlu yangaphakathi. Endaweni yezitulo, ibhedi yasemini inokusetyenziselwa ukubonelela ngendawo efanelekileyo yokuphumla okanye yokuphumla.
Olu luhlu lwegrabile yokuhombisa kunye nezitena lubonisa ubume benkqantosi obunendawo ekugxilwe kuyo kunye noyilo olujikeleze ipavile.
wenzani nelayisensi yomtshato emva komtshato
Gcwalisa ngeJacuzzi kunye nesikhululo esincinci sokugcoba, eli lilitye lembabala kunye nepati yegrabile yindawo efanelekileyo yokonwabisa abahlobo kunye nokudibana nosapho. Ilitye lekalika elisikiweyo kwiimilo ezingaqhelekanga kunye nobukhulu libonelela ngokwahluka kubume xa lidityaniswe namatye amhlophe apholileyo.
Amatye amakhulu e-adobe asemhlabeni asetyenziswa njengodonga lomngxuma womlilo kuyilo lwepatio. Irusi enemibala yobungakanani bepea gravel yongeza ubushushu kwinkangeleko kwaye igcwalisa umbala wezitulo ezibomvu zentsimbi.
Beka iibhloko zomthi ezinqunqiweyo ekusebenziseni kakuhle ngokuzibandakanya kuyilo lwegrabile yomngxunya womlilo. Banokusebenza njengendawo yokuhlala engacwangciswanga kuseto oluphefumlelweyo lwerustic.
Guqula indawo esecaleni kwiyadi yakho iye kwipatiyo entle apho unokuhlala khona kwaye wonwabele incwadi. Lo mfanekiso ungasentla ubonakalisa ipavumente kunye neparavel enikezwe izihlalo ezilula zokuphumla ukuze uzive ukhululekile.
# 1 iincwadi zokupheka ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
#Mbini Umhlawuli ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
# 3 amatye ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons) [/ yandisa]
Iingcamango ezinxulumene nepatio onokuzithanda:
Iingcamango ezintle zePatio - Iingcamango zamatye ePatio - Iingcamango zamatye agciniweyo - Uyilo lwePatio - Uyilo lweBrick Patio
Imibono yengxowa yesipho yeendwendwe zehotele yomtshato
Isinxibo esisemthethweni somtshato wabasetyhini
Ixabisa malini indandatho yesithembiso
ixabisa malini iintyatyambo zomtshato
Iingcamango zekhandlela lokuhlambela